Nyocha Uhans H5000, smartphone nwere batrị 4.500 mAh maka € 95 | Gam akporosis
Nyocha Uhans H5000, obere njedebe na batrị 4.500 mAh maka € 95
Oge nke a ka anyị ga-aga nyochaa Uhans H5000, otu n'ime ụdị ndị ọhụrụ emere na ahịa site n'aka onye nrụpụta China bụ Uhans na nke nta nke nta na-eme niche na ahịa ekele ụfọdụ ọnụ ala njedebe na asọmpi asọmpi. N'oge a, na Uhans H5000 ihe kachasị pụta ìhè bụ batrị ya, ebe ọ nwere 4.500 mAh nke na-enye anyị ohere ịgbatị nnwere onwe ya Bọchị 4 nke enweghị nsogbu. Ọnụ ego ya bụ € 95.
1 Sober ma ziri ezi imewe
2 Nka na ụzụ nke Uhans H5000
3 Igwefoto Uhans H5000
4 4.500 mAh batrị
7 Nkwubi okwu ikpeazụ banyere Uhans H5000
8 Uhans H5000 vidiyo nlele
9 Osisi Uhans H5000
Sober ma ziri ezi imewe
Uhans bụ ekwentị dị ala ma ọ na-egosi na ya sober imewe enweghị ọtụtụ ihe ngosi ma arụ ọrụ n'otu oge. Ọnụ ya dị na ọla edo na isi awọ; Dịka ị pụrụ ịhụ na foto ahụ, ihe nlereanya anyị bụ ọla edo, nke bụ nke kachasị mma na ụdị a. Okwu H5000 ọ bụ rọba, ihe a na-ahụkarị na ntinye ntinye ọ bụ ezie na e nweelarị ụdị ụfọdụ - ọ bụ ezie na ọ dị oke ọnụ - ejiri ọla. A na-eme ka akụkụ ya dị nkenke, nke doro anya na-eme ka njigide ekwentị ahụ ma gbakwunye mmetụ nke mma. Ogologo ya dị gram 180 na ọ bụ 12 milimita, ọ dị elu karịa nkezi mana ọ bụ ihe nkịtị ebe ọ bụ na ha ga-etinye batrị 4.500 mAh. Ekwentị anya ọma na aka ọ dịkwa ezigbo ọcha ebe ọ bụ na ịchọpụtaghị ụdị akara ọ bụla.
Tinggba nzọ na mfe, ala nke ama nwere oghere maka ndị na-ekwu okwu. N’akụkụ aka nri anyị ga-ahụ naanị bọtịnụ atọ (olu na ike) kemgbe n'ihu anaghị enwe mkpịsị aka ọ bụla, na-ahọrọ na nke a maka mkpọchi ndị etinyere na ihuenyo n'onwe ya.
Ihuenyo bụ 5 sentimita na panel ahụ bụ ụdị IPS. Mkpebi ya kachasị elu bụ pikselụ 1280 x 720 ma ọ na-arụ ọrụ ya n'agbanyeghị na anyị na-atụ uche ntakịrị ihie iji nweta nsonaazụ mara mma.
Nka na ụzụ nke Uhans H5000
Uhans ama ama abịa nwere Quad-isi MediaTek processor nke atụmatụ ya zuru ezu maka ụdị ihe atụ a, na mgbakwunye na ịchekwa ụfọdụ batrị. Igwe GPU agwakọtara bụ Mali-T720 na ọ ga-enye anyị ohere ịme egwuregwu na-achọ ihe mana ọ ga-ada ntakịrị oge maka egwuregwu ndị ahụ na-achọ na ọkwa ngwaike.
Na ọkwa nke Ram na ROM ebe nchekwa na ghaghị tụrụ anyị inwe 3 GB na 32 GB n’otu n’otu, ọtụtụ ihe karịa ihe a tụrụ anya na nke ahụ na-enye Uhans ohere ịgba ọsọ ruo ngwa 30 n’otu oge na-enweghị nsogbu. Enwere ike ịgbasa ebe nchekwa ROM site na kaadị microSD ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Na ọkwa Njikọ, ngwaọrụ nwere Wifi 802.11b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS na njikọta 4G / LTE dakọtara na ndị agha Spanish, atụmatụ ndị bụ isi mana ọ dị ezigbo mkpa.
Sistemụ arụmọrụ bụ ụdị kachasị ọhụrụ nke A gam akporo 6.0 Marshmallow na o siri ike ọ bụla mgbanwe na-akwanyere ndị ọkọlọtọ version nke Google.
Igwefoto Uhans H5000
Banyere ngalaba foto, ese foto nke Uhans H5000 ha ziri ezi ma mezuo ọrụ ha ọ bụ ezie na n'ụzọ dị mfe. Igwefoto azụ bụ 8 megapixels na ihe mmetụta Sony IMX219 na ọkụ ọkụ mgbe ihu na-anọdụ na 5 megapixels ma tinye ụda na foto ọ na-ewe. Site n'echiche anyị, ọ bụ ebe kachasị ike na smartphone na ebe a ụmụ okorobịa si Uhans nwere ohere maka imeziwanye maka ụdị n'ọdịnihu.
4.500 mAh batrị
Dịka anyị kwurula n'elu, batrị nke Uhans H5000 na-esote RAM na ROM isi okwu nke ihe nlereanya a n'aka onye nrụpụta Asia. Ihe 4.500 mAh na-enye ohere maka ikike nwere ikike iru ihe ruru 4 ụbọchị ma ọ bụrụ na ị na-eme nkịtị were, ma ọbụlagodi iji ya mee ihe ọfụma ọ ga-adịgide gị ruo ụbọchị 2 ma ọ dịkarịa ala. Na mgbakwunye na teknụzụ MediaTek mgbapụta Express ngwa ngwa ụgwọ Ọ na-enye anyị ohere ịtinye batrị ngwa ngwa, ihe dị ezigbo mkpa mgbe ịnwere batrị nwere nnukwu ikike dị otú ahụ.
32GB ROM gbasaa site na microSD
Igwefoto ndị dị ala
Ihe gbara ọkpụrụkpụ
Nkwubi okwu ikpeazụ banyere Uhans H5000
Uhans bụ ọnụ na naanị € 95 na-enye anyị a nnọọ na-akpali ike larịị ekele maka 3 GB nke RAM. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ ala dị ọnụ ala, nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke ahụ batrị na-ewe ọtụtụ ụbọchị na-enweghị nsogbu mgbe ahu obu ihe ichoro.
Uhans H5000 vidiyo nlele
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ nyocha vidiyo nke H5000, lee vidiyo nke ndị ọrụ ibe anyị si Akụkọ akụrụngwa. Ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ụdị nyocha a, ana m akwado gị kwụa ụgwọ na ntanetị YouTube ya site na ịpị ebe a ma ọ bụ na bọtịnụ na-esote. '
Osisi Uhans H5000
N'ebe a, anyị hapụrụ gị foto foto na nkọwa niile nke ụdị Uhans ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyocha Uhans H5000, obere njedebe na batrị 4.500 mAh maka € 95
Ọ dị njọ na ọ bụ maka America ma ọ bụ South America. Maka ọnụahịa m chere na ọ dị mma.
Zaghachi Rafael Palacios
Ngwa kachasị mma iji dezie ma degharịa foto
Google kọwapụtara otu gam akporo si achọpụta malware tupu ọ pụọ aka